Amakhodi weRoblox Promo 2020 & Wiki - Uhlu Lokusebenza (Disemba) - Ukudlala
Amakhodi we-Roblox Promo & Wiki - Disemba 2020
URoblox waziwa ngokunikeza ngokwezifiso uhlamvu oluguquguqukayo. Ungazakha futhi uziguqule ngokuya ngokuthanda kwakho. Noma kunjalo, kusenemikhawulo ethile maqondana nokwenza ngokwezifiso. Ezinye izinto zebanga le-premium nezesekeli zitholakala ngokuthenga noma ezinye izidingo.Usengathola indlela ezungeze yona futhi uthole amanye amakhodi ephromo wokuthola ezinye izesekeli ezihamba phambili nezinto. Ngalokho, udinga amakhodi wokusebenza akamuva.
Ngabe ufuna amakhodi wakamuva weRoblox newiki? Nawu umhlahlandlela ophelele wokukusiza ukuthi uthole amakhodi amahle kakhulu ephromo wezinto zamahhala nezinsiza. Manje usungakwazi ukulungisa i-avatar yakho ngendlela othanda ngayo.
Ukubuka konke kweRoblox:
URoblox ngumhlaba ovulekile onqunyelwe emcabangweni wakho. Ungakha futhi wenze ngezifiso izinhlamvu zakho nganoma iyiphi indlela oyithandayo. Okubaluleke kakhulu, umhlaba ovulekile ufaka imidlalo eminingi ongayidlala. Kufana neMinecraft ekubukeni kobuhle kepha kukhulu kakhulu. Ungayibiza ngendawo lapho umcabango wakho ungafezeka khona.
Abasebenzisi bangakha futhi bacabange imihlaba emisha yokwabelana nabangani babo nabanye abadlali ukuze badlale ndawonye. Cishe ayinamkhawulo ngohlobo lwegeyimu nomhlaba ongawakha. Yilokho okwenza uRoblox abe yipulatifomu ethandwayo. Noma kunjalo, ezinye izinto ziyafinyeleleka ngamakhodi ephromo. Yingakho udinga amakhodi ephromo kaRoblox.
I-Roblox Thwebula Khulula
Amakhodi Wokwazisa weRoblox - Izinzuzo
Amakhodi ephromo kaRoblox angadingeka ukufinyelela kwezinye zezikhumba ezinhle, izesekeli, izinto, izingubo, nokunye okuningi. Akukho mkhawulo nokuvinjelwa ezintweni ozizuzayo. Ngamanye amagama, awukho umkhawulo wesikhathi, izindleko ezingeziwe, noma yiliphi igama okufanele ulenze.
Lokhu kukuvumela ukuthi ube nokwenza ngokwezifiso okufinyeleleka kalula komlingiswa. Ngakho-ke, ungagqama ngezinye zalezi zengezo ezinhle kakhulu ohlwini. Khumbula ukuthi lawa makhodi enzelwe izinto ezitholakala kuRoblox.
Ayikho indlela yokuhlenga iRoblox mahhala noma ngesaphulelo ngokusebenzisa la makhodi wokukhushulwa. Ngalokho, kungadingeka ukuthi uhlole iwebhusayithi esemthethweni. Imvamisa bakhipha amadili athile angaheha wena.
Ingabe kukhona noma yimuphi umkhawulo kumakhodi we-Roblox Promo?
Njengoba kushiwo ngenhla, azikho ezinye izimo ezengeziwe zokusebenzisa ikhodi yephromo yeRoblox. Kodwa-ke, kufanele ube ngumsebenzisi okade wakhona ukuze usebenzise lamakhodi ephromo. Okubaluleke kakhulu, okunye kwalokhu kungasebenza kanye kuphela kumdlali ngamunye.
URoblox waziwa ngokusingathwa kwemicimbi engavula la makhodi ephromo. Abanye bangabathola futhi ngezipho zokuheha. Kodwa-ke, amanye amakhodi ephromo angaphelelwa yisikhathi, ngakho-ke kungadingeka ukuthi uhlole ukufaneleka. Ngakho-ke, udinga ukuhlala usesikhathini namakhodi ephromo.
Amakhodi wokuphrinta wakamuva weRoblox akwenza ukwazi ukuthola ezinye zezimpahla ezinhle kakhulu. Amanye amakhodi ephromo akhethekile nawo angaba nomkhawulo wesikhathi. Lokhu kukunikeza izimpahla ezithile ngesikhathi esinqunyiwe. Ngemuva kwalokho, kungadingeka ukuthi uthole amakhodi amasha.
Izinyathelo Zokusebenzisa Amakhodi Ephromo weRoblox:
Ukuze usebenzise amakhodi, qiniseka ukuthi uyilungu elibhalisiwe. Ngemuva kwalokho, kuzofanele ungene ngemvume ku-ID ofuna ukusebenzisa amakhodi kuyo.
Vakashela iwebhusayithi esemthethweni bese uvakashela ikhodi ahlenge ikhasi .
Ukuphela kokufanele ukwenze ukuthayipha ikhodi kubha etholakalayo. Qinisekisa ukuthi ungene ngemvume ngaphambi kokuchofoza ukusebenzisa ikhodi
Noma yini oyisebenzisayo manje izotholakala kuhlu lwakho.
Kufanele uhlale uhlola kabili futhi uqinisekise ukuthi ukuwebhusayithi eyiqiniso. Uma ususebenzise amakhodi, izinto zamahhala zizosakazwa ngokuzenzakalela ohlwini lwakho. Kuzoba ngaphansi kwesigaba leyo nto engokwayo. Yilokho kuphela okudingayo ukuze usebenzise lezi.
Uhlu Lwamakhodi Wokuphrinta Wamuva we-Roblox:
Nawa amanye amakhodi wokukhangisa weRoblox akamuva. Manje, okunye kwalokhu kungahle kukhawulelwe emidlalweni ongase uyidlale ukuze uyisebenzise. Ngaphandle kwalokho, konke lokhu kuyindlela eqinisekile yomlilo. Ungathola futhi isibuyekezo sakamuva kumakhodi ephromo ngokusesikhathini ezinkundleni zokuxhumana.
I-Dapper Narwhal Beer Pal: AMAZONNARWHAL2020
Amaphiko e-Topaz Hummingbird:IZINGOQO2020
Isigqoko se-Socialsaurus Flex:TWEET2MIL
Amahedfoni we-Gnarly Triangle:IZINSIMU EZINCANE 2020
Usuku Lwamahhala Lomoya 2020 Abangane Bamahlombe:UMOYA2020
Inyoni Ithi - Isilwane Samahlombe:TWEETROBLOX
I-Spider Cola Beer Pet:SPIDERCOLA
I-Fiery Fox Beer Pal:AMA-TARGETFOX2020
Wakha It ubhaka:UkusethaTheStage
Lawa ngamakhodi amahle kakhulu futhi akamuva ongawasebenzisa ukuthola izinto ongazisebenzisa nge-avatar yakho. Ungabahlomisa ngendlela othanda ngayo, futhi iningi labo lingunaphakade, ngaphandle komkhawulo wesikhathi.
Enye indlela yokuthola amakhodi wamahhala?
Kukhona Izinselelo Zabadali beRoblox ezikunikeza ithuba lokuwina ezinye zezinto. Isikhathi esiningi, konke okudingeka ukwenze ukuphendula imibuzo ethile. Iningi lale mibuzo lihlobene noRoblox, izinhlelo, nezinye izici ezifanayo. Abanye bangaba nemibuzo ephathelene nomcimbi othile.
Ekugcineni, unendlela eqinisekile yomlilo yokuthola izinto ezithile. Kodwa-ke, kufanele uqinisekise ukuthi ufinyelela inselelo yomdali ngewebhusayithi esemthethweni kaRoblox. Ungasebenzisi enye indlela ukufinyelela kulezi zinselelo.Iningi lale mibuzo liyasebenziseka futhi linomoya ohelezayo. Ngokuyinhloko ngenxa yemikhawulo yobudala beRoblox. Ngakho-ke, noma ungenalo ulwazi olujulile ngeRoblox, izinhlelo, noma eminye imisebenzi, asikho isidingo sokuthi ukhathazeke. Usengathola ukunikezwa okuhehayo.
Ngokuya ngenani lezimpendulo ezifanele ozinikezayo, izinto zingahluka. Eminye imibuzo ingalahla uma unikeza impendulo eyodwa engalungile nokunye. Konke kuncike ekutheni bayilungiselela kanjani imithethonqubo ezoba yiyo.
URoblox uhlala enye yamapulatifomu aheha kakhulu ukuhlangana nabadlali emhlabeni wonke futhi adale imibono yakho yokuqala, imihlaba nemidlalo. Ngokusebenzisa lamakhodi wokuphrinta weRoblox kanye newiki 2020, uqhubekisela phambili lokhu okuhlangenwe nakho. Hlala usesikhathini namakhodi futhi ujabulele eminye yemiklomelo emihle kakhulu!
I-Hulu vs Sling TV - Iyiphi Insiza Yokusakaza Ehamba phambili?
INvidia Geforce RTX 3060 Ti - Konke Kuchaziwe